Dv လျှောက်လို့မရလို့ပါ - MYSTERY ZILLION
part 1, part2လျှောက်ပြီးလို့ view ဆိုတော့
[/FONT] [FONT=Arial, Helvetica, Geneva, SunSans-Regular, sans-serif] Version Information: Microsoft .NET Framework Version:2.0.50727.832; ASP.NET Version:2.0.50727.832
begin ssl entry ကို သုံးပါ
မြန်မာ စံတော်ချိန် 1130am 01/12/09 အချိန်ထိတင်လို့ ရပါသေးတယ်
အနော်စမ်းကြည့်တော့ ssl entry ကို၀င်၀င်ချင်း https://www.dvlottery.state.gov/application.aspx
ဖြစ်သွားပါတယ် .. ကူညီပါအုန်း (
အကို 404 နဲ့တိုးနေတယ် .... (
The requested URL /forums/www.24proxy.com was not found on this server.
Apache/2.0.54 Server at www.mysteryzillion.org Port 80
ကျွန်တော်တော့ အောက်ကလင့်နဲ့ရနေတယ် စမ်းကြည့်ပါအုံး
http://www.dvlottery.state.gov/application.aspx ဒါမှမဟုတ်ရင် https://www.btunnel.com/ နဲ့ ၀င်ကြည့်ပါ ကျွန်တော်တော့ နှစ်ခုလုံးနဲ့ ရပါတယ်
khinegood wrote: »
I also can go through with above link. But I have problem with photo. When I summit my photo, error was my photo not 600x600 pix. But I already resize to under 600x600. Somebody please help me what to do with my photo. How to upload my photo with their standard.?
sai lay wrote: »
ဓါတ်ပုံအတွက် စည်းမျဥင်္းတွေထုတ်ပြန်ထားပါတယ် ။
လုံး၀ မပြင်ရပါဖူးး ။ Scan ဖတ်ရင် တခါတည်း 600x600 Pix နဲ ့ဖတ်ပါ ။
အဓိကကတော့ဦးခေါင်းနဲ့ပခုံးအထိဘဲ ပါရပါမယ် ။ အောက်မှာဖော်ပြထားတဲ ့အတိုင်းကြည် ့လုပ်ပါ ။ အသေးစိတ်ကို သည်နေရာမှာဖတ်နိုင်ပါသည် ။
ဓါတ်ပုံ Resolution က ဘယ်လောက်လဲမသိဘူးနော်
72 အောက်ဖက်ထိလျှော့ရသေးတယ် ကျွန်တော်မမှတ်မိတော့လို့ ပြန်ရှာကြည့်လိုက်ပါအုန်းမယ်
72dpi အောက်လောက်နဲ့စမ်းကြည့်ပါလား အချိန်ကသိပ်မကျန်တော့လို့
Freedom နဲ့ သုံးကြည့်ရင်ရပါတယ်။
sygateiky wrote: »
အဲဒီ freedom ကိုဘယ်လိုသုံးရမလဲသိအချိန်ရရင်ပြောပေးပါအုန်း